Grining, na ubi-vine district na Vienna | Akụkọ Njem
Grining, na ubi-vine district na Vienna
Azọ dị mkpirikpi na tram mara mma nke Viennese na-akpọga anyị n'otu n'ime agbataobi nwere ụdị mmadụ kachasị dị na isi obodo Austria, ugwu ndi juputara n'oké ọhịa na ubi-vine gbara ya gburugburu: Ọchị. Taa, ọ bụ otu agbata obi nke oke mara mma ViennaMa afọ ndị gara aga, ọ bụ ọmarịcha obodo na ochie amara ka na-efu efu.
Grinzing si mgbịrịgba ụlọ elu, ya na e ji mara bulbous dome, n'egosi ebe ị ga-esi na-enweta ochie n'okporo ámá nke agbata na ya ama gastronomic enye. N'oge opupu ihe ubi akwụkwọ ozi ahụ mara mma: ụlọ ndị dị ala nwere ihu mara mma, geraniums na mbara ihu, na karịa ihe niile ọtụtụ na animated Heurigen, ebe a na-ahụkarị ebe obibi ndị Viennese.
na Heurigen Ha na-emeghe naanị n'ehihie, site na ise ma ọ bụ isii, ọ bụ ezie na a na-enye biya biya, ihe ọdịnala bụ ịnwe iko mmanya ọcha. Ọ bụ ndị Rom butere omenaala a ochie Vindobona, na ókèala Danube nke ahụ kewapụrụ ụwa ndị mba ọzọ na mmepeanya, ndị Vienna echefubeghịkwa ya. Kedu ka ị ga - esi mara ma Heurigen nwere mmanya? Lee anya na mbata nke ọnụ ụzọ ahụ, chọọ ya mma alaka pine.
Soro mmanya, nke a na-arụ ọrụ na ya vetal (quart) anyị nwere nri siri ike nke gastronomy dị na mpaghara ahụ na-arụ ọrụ na nri: ọgazị, anụ ezi anụ ezi, goulash ... Ọnọdụ ahụ zuru oke na uwe ndị na-ahụkarị nke ndị na-elekọta ụlọ, egwu dị ndụ na, n'ezie, vapors mmanya na-arụ ọrụ ya n'etiti ndị ahịa.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mmanya, ebe a eze bu Riesling, ọ bụ ezie na e nwekwara ụdị ekele ndị ọzọ akpọrọ akpọrọ dị ka Onye traminer ma ọ bụ Muskat ahụ. Na mgbakwunye na ị drinkingụ ihe ọ andụ andụ na iri nri, na Heurigen anyị nwekwara ike ịzụta karama mmanya nke a na-eme n'ubi vaịn Grinzing tupu ịlaghachi na Vienna nke alaeze, nke dị njọ ma na-enyeghị ngosipụta ọ theseụ ndị a.
Ozi ndị ọzọ - Otu ụzọ mgbapụ na Vienna
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Austria » Grining, na ubi-vine district na Vienna
Ezi ekele, na 2010 M gara Vienna ma rie nri abalị na ụlọ oriri na ọ beautifulụ beautifulụ mara mma na! Na-atọ ụtọ, nke ndị mmadụ ụwa lere anya. Agaghị echefu anyị abalị !!! agba egwu, egwu, obi uto na "WRE Wine" FANTASTIC !!!!!!!!!!!!!!!!!
Zaghachi Nelva Nora
Ndewo Nelva Nora,
Obi abụọ adịghị ya, na Grinzing anyị na-ahụ ihu enyi kachasị na Vienna. Ikekwe obere ihe dị ebube ma dị ebube karịa obodo ndị ọzọ, mana juputara na amara.
Passau (Germany): obodo mara na Bavaria
Aokigahara, ebe zuru oke ịnwụ